‘दर्शकको माया सबैभन्दा प्रिय’- कला - कान्तिपुर समाचार
‘दर्शकको माया सबैभन्दा प्रिय’
फाल्गुन ५, २०७६ सुशील पौडेल
काठमाडौं — नेपाली फिल्म क्षेत्रमा कलाकारका रुपमा निरन्तर लामो समय व्यतीत गर्ने पहिलो पंक्तिका अभिनेतामा पर्छन्, राजेश हमाल । पहिलो फिल्म ‘युगदेखि युगसम्म’ हुँदै लगातार तीन दशक उनले फिल्म क्षेत्रमा बिताइसकेका छन् । सयौं फिल्म खेलिसकेका छन् । त्यसताक अभिनेता हमाल फिल्मका लागि तरकारीमा आलुजस्तै अनिवार्य बनिसकेका थिए । पोस्टरमा उनको टाउको छापेरै धेरै फिल्म चले । दर्शकले पनि राजेश हमाललाई हिरोका रूपमा निसर्त स्वीकार गरिरहे ।
फिल्म चले, हमाल चले तर नेपाली फिल्म क्षेत्रले गुणात्मक फड्को भने मार्न सकेन । पाँच दशक लामो इतिहास बनाइसक्दा पनि नेपाली फिल्म क्षेत्रले दायरा फैलाउन सकिरहेको छैन । विश्व फिल्म मञ्चमा आफूलाई परिचित गराउन अझै प्रयास नै गरिरहेको छ । कतिपय यसको दोष अभिनेता हमाललाई लगाउँछन् । उनले जथाभावी फिल्म नखेली गतिला फिल्म मात्रै खेलिदिएको भए वा खेल्ने इच्छा व्यक्त गरिदिएको भए पनि आज नेपाली फिल्म क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो । किनभने त्यो बेला हमालको बोलबाला थियो । उनले चाहनेबित्तिकै फिल्मकर्मीहरू उनैको पछि दगुर्थे । यस्ता टिप्पणी हमालले धेरैपटक नसुनेका होइनन् ।
आइतबार राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा जारी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव (निफ) मा आफ्नो फिल्मी करिअरको यात्रा वर्णनमा प्रस्तुत भएका अभिनेता हमालले सम्भावित प्रश्न आउनुअगावै भने, ‘त्यो बेला आजजस्तो फिल्म बन्थेनन् । इतिहास लामो भए पनि मैले ‘युगदेखि युगसम्म’ गर्नुअघि मुस्किलले एक दर्जन मात्रै फिल्म बनेका थिए । २–३ वर्षमा एउटा फिल्म बन्थ्यो । व्यावसायिक रूप लिइसकेको थिएन । त्यसैले त्यो बेलाको परिस्थिति बुझ्न त्यही बेलाकै चस्मा लगाएर हेरिनुपर्छ । त्यो बेला धेरैभन्दा धेरै फिल्म बनुन् भन्ने थियो । ममाथि लगानी गर्न चाहनेलाई हतोत्साही गराउनु थिएन । म खेलेकै कारण धेरै जनाको त्यस फिल्ममा आबद्धता हुन्थ्यो ।’ हमालले कूटनीतिक जवाफ दिंदै आफूले धेरैभन्दा धेरै फिल्म खेल्नु नै त्यसबेला जायज भएको बताए ।
‘पहिलो फिल्म खेल्दासम्म पनि म अन्योलमै थिएँ । यदि यो फिल्म हिट नै भयो भने पनि अर्को कदम के हुन्छ ? भविष्य के होला भन्ने थाहा थिएन,’ झन्डै सबा एक घण्टा लामो मन्तव्य क्रममा हमालले थपे, ‘तर त्यो फिल्म प्रदर्शनमा आएपछि दर्शकले यति धेरै रुचाइदिनुभयो कि फिल्म क्षेत्रमा सानोतिनो क्रान्ति नै आयो । त्यसको एक–डेढ वर्षभित्रमा त म एकसाथ दुईवटा फिल्म गर्ने भइसकेको थिएँ भने दैनिक १४ घण्टासम्म फिल्ममै व्यस्त हुन थालें ।’ हमालको करिअर ग्राफ कहिल्यै तल झरेन । आफ्नो फिल्मी कथा सुनाइरहँदा सन्तुष्ट भावमा देखिएका उनले जति संघर्ष गरे सुरुआती दिनमा नै गरे । शिक्षित परिवारमा जन्मे, हुर्केका हमाल फिल्म क्षेत्रमा लाग्छु भन्नु आफैंमा ठूलो विरोधाभास मानिन्थ्यो, त्यसताक ।
बुबा फिल्म क्षेत्रमा छोराको करिअर देखिरहेका थिएनन् । छोरालाई फिल्मको भूतले छोडेको थिएन । झगडा गरेरै खेलेको पहिलो फिल्मबाटै निकालिए हमाल । ‘मुस्किलले ५–१० प्रतिशत छायांकन भएको थियो होला । मलाई अभिनयमा खोट लगाउँदै निकालियो । पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो,’ तैपनि हमालले आत्मविश्वास हारेनन्, पश्चात्तापमा गलेनन्, ‘जे कुरामा पनि लगावका साथ प्रयास गर्‍यो भने सफलता पाइन्छ । पछि एउटा विन्दुमा गएर पछुताउनुभन्दा पुनः प्रयास गर्नु राम्रो हो । सफलता नै नपाइने देखियो भने बल्ल विकल्पमा लाग्नुपर्छ ।’ आखिर जसले हमाललाई पहिलो फिल्मबाट हटाए, दुई वर्षपछि तिनै अर्को फिल्मको प्रस्ताव लिएर हमालसमक्ष आए । ‘सायद त्यही ५–१० प्रतिशत खिचेको फुटेजमा मेरो काम हेरेर दम देख्नुभयो कि ?’ राजेशको नायकत्वको दम देख्ने उनकै मामा दीपक रायमाझी थिए ।
‘युगदेखि युगसम्म’ को प्रिमियरमा हमाललाई ढाडस दिन उनकै बाबुआमा समेत पुगेका थिएनन् । साथीभाइहरू नेपाली फिल्म नै हेर्दैनथे रे । ‘तर त्यो फिल्मपछि दर्शकले मप्रति देखाएको विश्वास र दिएको साथ सबैभन्दा प्रिय भयो । मलाई दर्शकले यति धेरै स्वीकार गरिदिनुभयो कि त्यसको जति खुसी कुनै अवार्ड, पुरस्कार वा पदवीले पनि दिन सक्दैन । दर्शककै साथले मैले झन्डै १२ वर्ष अनवरत दैनिक १८ घण्टा फिल्म क्षेत्रमै सक्रिय भएँ,’ हमालले भने ।
अभिनेता हमाल आफू यस क्षेत्रमा लागेर पाएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको नेपाली समुदायसँग गहिरो सम्बन्ध राख्न पाएको ठान्छन् । भन्छन्, ‘फिल्म खेल्नुअघि त्यसरी नजिकिन पाएको थिइनँ ।’ हुन पनि उनले प्रायः मजदुर, किसानका भूमिका बढी गरे । धेरै चरित्रमा बाँचे । ‘मैले चरित्र निर्वाह गर्दा पनि आम दर्शककै स्वाद र मनोविज्ञानलाई समेट्नुपर्छ भन्ने ठानेर अघि बढें । त्यसकारण पनि दर्शकसँग मेरो अटुट नाता सम्बन्ध रहिरह्यो,’ हमालले चरित्र निर्वाह गरिरहँदा सधैं ती चरित्रको दृष्टिकोणमा उभिएर हेर्ने कोसिस गरेको तर्क गर्दै थपे, ‘दस दिनको भोको मान्छेको अभिनय गर्दै छु भने म स्वयं दस दिन भोकै बस्नु पर्दैन । बरु दस दिन भोकै हुने व्यक्तिले कस्तो महसुस गर्ला ? त्यो दृष्टिकोण बुझ्ने क्षमता राखेर काम गर्छु ।’
सोमबार समापन हुँदै गरेको निफको अघिल्लो दिन आइतबार ‘वासुदेव’ स्क्रिनिङसँगै यसका निर्देशक, अभिनेता नीर शाह, अभिनेता हरिहर शर्मालगायतले प्यानल बहस गरेका थिए । त्यसैगरी, आइतबार नै साहारा शर्मा निर्देशित फिल्म ‘मिस बर्दिया’ को प्रिमियर पनि गरिएको थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०९:५०
थिएटरमा रहर, इच्छा हुन्छ तर पैसा हुादैन । कतिपयले फिल्म उडानको ट्रान्जिट बनाइरहेका छन् ।
माघ २२, २०७६ सुशील पौडेल
काठमाडौँ — बुधबारदेखि राजधानीको कमलपोखरीस्थित रुसी सांस्कृतिक केन्द्रमा आठ दिन लामो राष्ट्रिय बालनाटक महोत्सव हुँदै छ । बालबालिकाले बालबालिकाकै लागि मञ्चन गर्ने नाटकको महोत्सवले दशकको यात्रा तय गरिसकेको छ । शैली थिएटरले गर्दै आएको महोत्सवको मुख्य योजनाकार हुन्, नवराज बुढाथोकी । शैलीका अध्यक्षसमेत रहेका बुढाथोकी यतिबेला महोत्सव व्यवस्थापनको काममा बढी व्यस्त देखिए ।
२०६६ मा पहिलो पटक बाल नाटक महोत्सवको प्रस्ताव गर्दा बुढाथोकीकै ‘शैली’ सहकर्मीले पत्याएका थिएनन् । ‘बालबालिकाको नाटक देखाएर पनि महोत्सव गर्न सकिएला र ?’ केही सहकर्मीले शंका गरे । तैपनि शैलीले आँट गरिछाड्यो । चार/पाँच स्कुले नाटक सहभागी भए । ‘संख्या थोरै त थियो नै, गुणस्तरीय पनि थिएनन्,’ शैलीका अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, ‘त्यसपछि अर्को वर्षबाट हामीले यसलाई प्रतियोगात्मक बनायौं । पुरस्कारको व्यवस्थाले सहभागीलाई प्रतिस्पर्धी बनायो, प्रतिस्पर्धाले गुणस्तरीय ।’ ११ औं वर्षमा आइपुग्दा यसपटक १६ प्रतियोगी नाटक सहभागी भइरहँदा बुढाथोकी दंग देखिए ।
दस वर्षअघि बाल नाटक महोत्सव गर्न आँट्नु चानचुने कुरा थिएन । शैली थिएटरले जेनतेन त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । सुरुवाती वर्ष नाटकमार्फत सहभागी कतिपय बालबालिका अहिले रंगमञ्चमै सक्रिय छन् । ‘कलाकार नभएका पनि राम्रा दर्शक बनेका छन् । हाम्रो प्रयासले नेपाली रंगमञ्चको विकास र विस्तारमा एउटा आधारशिला खडा भइरहेको देख्दा खुसी लाग्छ,’ अचेल कैयौं निजी विद्यालयले ड्रामा टिचर नै राखेर पढाउन थालेको देख्दा पनि बुढाथोकी उत्साहित हुन्छन् । नाटक मञ्चन समूह अभ्यास हो । यसमा संलग्न भइसकेपछि बालबालिकामा व्यक्तित्व विकास हुनुका साथै कला, साहित्य, संस्कृति र समाजलाई सानैदेखि बुझ्न तथा अनुशासित बनाउन भूमिका खेल्ने गरेको अनुभव अध्यक्ष बुढाथोकीको रहेछ । केन्द्रको एउटा सानो कोठाबाट सुरु भएको शैलीको यात्रा यतिबेला रातोपुलस्थित आफ्नै नाटकघरसम्म पुगेको छ । २०६४ तिर बुढाथोकीसहित सात/आठ जनाको समूहलाई रुसी केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजीव दवाडीले एन्तोन चेखवको नाटक मञ्चनको प्रस्ताव गरे ।
चेखवको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर चेखवकै कथामा उक्त समूहले ‘एउटा बुइगल भएको घर’ देखायो । नाटक जम्यो । केन्द्रले लगत्तै अर्को प्रस्ताव गर्‍यो । रंगमञ्चमा केही गरौं भन्ने जुझारु युवाहरूको समूह पछि हट्ने कुरै थिएन । चेखवकै ‘स्वान सङ’ लाई नाट्य रुपान्तरण गरेर देखाइदिए । रुसी केन्द्र थप उत्साहित भई स्क्रिप्ट थमायो र भन्यो, ‘के यसमा नाटक गर्न सक्छौं ?’ बुढाथोकीले अतीत सम्झँदै भने, ‘नसक्ने के थियो र ? हामीले त्यसलाई ‘सरकारी निरीक्षक’ शीर्षकमा नाटक गर्‍यौं ।’ त्यही समूह नै पछि विधिवत् शैली थिएटरका नाममा गोलबन्द भयो । रुसी केन्द्रले आफ्नै भवनमा एउटा कोठा उपलब्ध गराइदियो । त्यसपछि शैलीले रुसी केन्द्रकै प्रेक्षालयमा रुसी र नेपाली साहित्यमा निरन्तर नाटक मञ्चन गर्न थाल्यो । विदेशी साहित्यका नाटक पनि नेपाली समाजसँग रिलेट गर्दै मञ्चन भइरहे ।
दस वर्ष केन्द्रमा बसेर दुई दर्जन नाटक गरेपछि शैली मंसिरदेखि आफ्नै भवनमा सरेको छ । केन्द्रको कोठामा खुम्चेर बसेको शैली यतिबेला फुकेको छ । ‘कतिपय कुरा उहाँहरूको र हाम्रो मिल्थेन । चाहेको अनुसार सेट लगाउन, लाइट राख्नजस्ता प्राविधिक समस्या हुन्थे,’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘अहिले आफूले मन लागेअनुसार काम गर्न पाएका छौं ।’ केन्द्रको हल नाटककै लागि मात्रै थिएन । त्यसैले पनि नियमित नाटक मञ्चन गर्न मिल्थेन । एउटा नाटक बढीमा पाँच दिन मञ्चन हुन्थ्यो । हल नै खाली हुँदैनथ्यो । ‘मिहिनेत गरेर नाटक तयार पार्थ्यौं अनि खर्च गरेर स्टेज बनाइएको हुन्थ्यो । त्यति सोजले न खर्च उठ्थ्यो न त कलाकारले धित मरुन्जेल काम गर्न नै पाउँथे,’ बुढाथोकीले अर्को घटना पनि सुनाए । बालनाटक महोत्सवकै लागि भनेर शैलीले एउटा नाटक तयार पारेको थियो । बाँसैबाँस प्रयोग गरेर सेट तयार पारेको थियो । पछि केन्द्रले भुइँ कोरिने समस्या देखाउँदै नाटकलाई दोहोर्‍याएर मञ्चन गर्न दिएन ।
२०५४ मा राष्ट्रिय नाचघरमा नाटक सिक्न पुगेपछि यही क्षेत्रमा रौसिएका बुढाथोकी त्यसपछि नाचघरकै प्रशिक्षार्थीले खोलेको आख्यान आर्ट ग्रुपदेखि पम्किन थिएटरसम्म आबद्ध भई नाट्य क्षेत्रमा रमे । पछि साथसाथ नामक एनजीओमा संलग्न भई सडक बालबालिकाका लागि नाटक अभियानमा जोडिए । ‘त्यो सडक बालबालिकालाई नाटक सिकाउने र समाजमा पुनर्स्थापना गराउने उद्देश्य थियो,’ बुढाथोकीले नाटककै कारण कतिपय बालबालिका पुनर्स्थापितसमेत भएको सम्झन्छन् । बालबालिकासँग नजिक रहेर काम गर्न रुचाउने उनी रेडियो सगरमाथाका कार्यक्रम प्रस्तोता पनि हुन् । त्यहाँ पनि उनले बालकार्यक्रम चलाए । बालबालिकाप्रतिको झुकाव अझ बाक्लियो । उनीहरूका मुद्दाबारे धेरथोर जानकार हुँदै गए । उनी त्यसैको रिफ्लेक्सन मान्छन्, राष्ट्रिय बाल नाटक महोत्सवलाई ।
शैलीको यात्रा सहज भने रहेन । भन्छन्, ‘सबभन्दा गाह्रो कुरा नै कलाकार टिकाइरहन हुन्छ । एउटा लेभलमा पुगेपछि छोड्छन् । निःशुल्क वा थोरै पैसामा पनि कतिन्जेल गर्ने भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । अरू बाटा खोज्न थाल्छन् । जुन समस्या अहिले पनि छ । थिएटरमा रहर, इच्छा हुन्छ तर पैसा हुँदैन ।’ आफ्नै भवनमा सरेपछि आम्दानी बढ्दै जाला कि भन्ने बुढाथोकीको विश्वास छ, ‘अरू व्यवसायबाट मान्छे बाँच्न सक्छ भने थिएटरबाट किन नसक्ने ?
कतिपयले थिएटरलाई फिल्म उडानको ‘ट्रान्जिट’ पनि बनाइरहेका छन् । उनी यसलाई गलत भन्दैनन् । ‘तर थिएटरको ट्याग भिरेर मात्रै फिल्म खेल्न जानु भएन । सिकेर जानु त राम्रो हो नि ।’ उनले अहिले त म्युजिक भिडियोमा समेत थिएटर आर्टिस्टको डिमान्ड देख्दा रमाइलो मान्छन् । २०५४ तिर राष्ट्रिय नाचघरमा खाजा खुवाउँछु भन्दा पनि नाटक हेर्न नआउने देखे/भोगेका बुढाथोकी अचेल टिकट नपाएर दर्शक फर्किनुपर्ने अवस्था आउनु र नाटकलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको देख्दा रंगमञ्चको भविष्य राम्रो देख्छन् । थप्छन्, ‘तैपनि समस्याचाहिँ राम्रा नाटकको छ । विदेशी नाटक किन गरेको भन्ने प्रश्न आइरहन्छ । तर नेपालमा नाटक लेख्ने नयाँ पुस्ता नै आएन । अझै पनि बालकृष्ण सम, भीमनिधि तिवारीकै नाटकमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रकाशित : माघ २२, २०७६ ०९:२८
कलाकृति बनायो, थन्क्यायो
जाँदै छ कता नेपाली संगीत
घरायसी सामग्री बने क्यानभास
रुसमा उत्कृष्ट बन्यो ‘सहायक श्रीमान्’
पौभाका ती दिग्गज
अपडेटः बिहीबार, १५ असोज, २०७७ । १० : २० बजे